८ घण्टा उत्पादन गर्ने कम्पनीले २४ सै घण्टा उत्पादन गर्छन अक्सिजन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पहराबीच कता हराउँछन् अक्सिजन ? – Classic Khabar
८ घण्टा उत्पादन गर्ने कम्पनीले २४ सै घण्टा उत्पादन गर्छन अक्सिजन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पहराबीच कता हराउँछन् अक्सिजन ?
May 13, 2021 164
काठमाडौका अधिकांश नीजि अस्पतालहरुले अब विरामीको उपचार गर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसके । कतिपय अस्पतलले भर्ना गरिएका विरामी पनि फिर्ता लैजाउ भनेका छन् । अक्सिजनको अभाव भन्दै नीजि अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने बताइरहँदा उत्पादन भएको अक्सिजन कहाँ खपत भएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विगतमा ८ देखि १० घन्टा अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु यतिबेला २४अ‍ै घन्टा सञ्चालनमा छन् । उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको गेटदेखि अक्सिजन भर्ने ठाउँसम्म २४सै घन्टा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पहरा छ । कडा सुरक्षासहित नियमित अक्सिजन उत्पादन हुँदा पनि अक्सिजन कहाँ हराइरहेका छन् ?
नीजि अस्पतालहरुले अक्सिजन लैजान सरकारको सिफारीस चाहिन्छ । सिसिएमसीको सिफारिस र उसले तोकेको कोटा अनुसार मात्र नीजि अस्पतालले अक्सिजन पाउने भएकाले नीजि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएको हो ।
मेडिसिटी, हेल्पिङ ह्याण्डलगायत उपत्यकाका अस्पतालहरु विरामी भर्ना लिन नसक्ने भन्दै सूचना जारी गरेका छन् । खाली सिलिन्डर समेत भर्न नपाएपछि अस्पतालका सञ्चालकहरु विरामी बचाउन नसक्ने हालतमा पुगेको गुनासो गर्छन् । विरामीका कुरुवालाई अक्सिजन आफै व्यवस्था गर्न अस्पतालले भन्न थालेका छन् भने भर्ना भएका विरामीलाई अन्यत्र लैजान भनेका छन् ।
सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर खोज्ने र भर्दा अस्पतालहरुका लागि कोटा नै तोकेको छ । प्रत्येक पटक अक्सिजन आपूर्ति गर्दा गृह मन्त्रालयबाट खटिएकाहरुको निगरानी हुने गरेको छ । यसले पनि पहुँच र प्रभाव हुनेहरुले मात्र अक्सिजन पाउने अवस्था बन्न थालेको छ ।
पहुँच र प्रभाव नभएका सर्वसाधारणले अक्सिजन पाउने सम्भावना कम भएपछि अस्पताल झन् खतरनाक बनेको छ । डाक्टरहरु नै विरामीलाई घरमै कोरोनाविरुद्ध संघर्ष गर्न सुझाव दिन थालेका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार पहुँच र प्रभावको भरमा अक्सिजन भर्ने अवस्था निर्माण गर्न थालिएको छ । निजी अस्पतालहरुले अक्सिजन आवश्यकताभन्दा निकै कम पाउन थालेका कारण अभाव सिर्जना भएको हो । सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन त छ तर त्यहाँ पहुँचवालाले मात्र भर्ना र शैया पाउने अवस्था बनेको छ ।
Prevलोक गायिका शोभा कार्कीले बिगत सम्झेर धुरु धुरु रुदै भनिन:आमाको लासमाथि चढेर मैले दुध खाए
Nextडाक्टरको पुकार, सरकार अक्सिजन देउ ! हामी धेरै विरामी बचाउन सक्छौं,अक्सिजन ठुला बडाले लुकाए त्यहाँ छापा मार सरकार